Ethisterone အမှုန့် (434-03-7) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Ethisterone အမှုန့် (434-03-7)
SKU: 434-03-7. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်ရှိဂရမ်မှ Ethisterone Powder (434-03-7) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူဖြစ်သည်။
Ethisterone အမှုန့် (434-03-7) ဗီဒီယို
Ethisterone အမှုန့် (434-03-7) Specification:
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: Ethisterone
CAS အမှတ်: 434-03-7
နာမ်: ၄,၁၇ ALPHA-PREGNEN-4,17BETA-OL-17-YN-20-ONE
Ethisterone အမှုန့် (434-03-7) Description:
Ethisterone အမှုန့်သည် Aethisteron ဟုလည်းခေါ်သည်။ Ethisterone သည်ဓာတု contraceptive နှင့်ယခင်က contraceptics တွင်အသုံးပြုသောပရိုဂျက်တာ receptor agonist ဖြစ်သည်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုတားဆီးသည်။
1: Kumar: D, Mishra KB, Mishra BB, Mondal S, Tiwari VK ။ ဓာတုဗေဒကိုကလစ်နှိပ်ပါ triazolyl ethisterone glycoconjugates ၏အလွန်အမင်း facile ပေါင်းစပ်မှုတ်သွင်း။ Steroid တစ်မျိုး။ 2014 ဖေဖော်ဝါရီ; 80: 71-9 ။ Doi: 10.1016 / j.steroids.2013.11.022 ။ Epub 2013 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ5PubMed PMID: 24316164 ။
2: Mishra KB, Mishra BB, Tiwari VK ။ bis-triazole ချိတ်ဆက်မှတဆင့် ethisterone glycoconjugate ၏ထိရောက်သောပေါင်းစပ်။ Carbohydr Res ။ 2014 နိုဝင်ဘာ 18; 399: 2-7 ။ Doi: 10.1016 / j.carres.2014.09.001 ။ Epub 2014 စက်တင်ဘာ 16 PubMed PMID: 25369262 ။
၃: Guo WJ၊ Wang YT၊ Kong DX၊ Wang JY, ဝေ QH၊ Chen GN ။ Luminescent Ag3Au6 heterometallic ethisterone Cluster နှင့် Estrogen receptor αအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ ဓာတုဗေဒ။6မတ်လ 2015;9(21): 11-4205 ။ Doi: 8 / chem.10.1002 ။ Epub 201405925 ဇန်နဝါရီ 2015. PubMed PMID:7။
ဆေးထိုးအသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ AAS ကုန်ကြမ်း Providence သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% testosterone decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်။
testosterone decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း